Iziphumo zemfuyo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Imfuyo inokunciphisa ukukhutshwa kwegesi engcolileyo ngama-30%
Ngokwayo imele malunga nesinye kwisithandathu sezinto ezikhutshwayo ze igesi yendlu eluhlaza. Imfuyo ikhupha iigigatoni eziyi-7,1 ze-CO2 ezilinganayo ngonyaka emoyeni, oko kukuthi, i-15% yazo zonke izinto ezikhutshwa yi-COXNUMX mvelaphi umntu.
Kodwa ngokwengxelo entsha evela kuMbutho we Iintlanga I-Unidas Ukutya kunye nezoLimo (i-FAO) epapashwe ngoLwesine odlulileyo, nge-26 kaSeptemba, kunokwenzeka ukunciphisa oku nge-30% izinto ezikhutshwayo, usebenzisa ezona ndlela zilungileyo kunye ubuchwephesha ekhoyo.
El kufunda, olona gqithiso lwenziwe kulo mbandela ukuza kuthi ga ngoku, lihlalutye onke amabakala omjikelo wobomi we ukufuya iinkomo: ukuveliswa kunye nokuthuthwa kokutya kwezilwanyana, ukusetyenziswa kwamandla efama, ukukhutshwa ekucoleni kunye ukubila yomgquba, kunye nezothutho, ifriji kunye nemeko yo iimveliso lwanyana emva kokubingelela ngabo.
Eyona mithombo iphambili ye- izinto ezikhutshwayoImveliso kunye notshintsho lwefula (45%), ngakumbi ngenxa ye- izichumisi imichiza isetyenziswa kwizityalo, ukwetyiswa kwezilwanyana (39%), kuba iinkomo ziyaphuma methane, igesi inamandla angama-25 ngaphezulu kwe-CO2, kunye nokubola umgquba (10%). Zonke ezinye zibangelwa lutshintsho kunye nokuthuthwa kwefayile iimveliso izilwanyana.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ubuntu bungena kwixesha lamatyala endalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » Imfuyo inokunciphisa ukukhutshwa kwegesi engcolileyo ngama-30%
I-stratosphere ichaphazela ngokuthe ngqo imozulu yoMhlaba
Izibonelelo zecotton organic